Part 1: Mgbe ọ bụ oge kwesịrị ọcha iPhone ọkà okwu?
Part 2: Olee ọcha iPhone ọkà okwu
Nkebi nke 3: Kwadebe ọrụ gị - ihe dị gị mkpa
Nkebi nke 4: Disassembling gị iPhone
Part 5: Ikpocha Ọkà Okwu
Nkebi nke 6: Reassembling Your iPhone
Nkebi nke 7: bara uru Atụmatụ
E nwere ọnọdụ mgbe ọ na-aghọ ezigbo mkpa ọcha gị iPhone ọkà okwu iji nweta àgwà ọdịyo mmepụta. Ụfọdụ ebe nwere ike ị chọrọ ime otú ahụ na-agụnye:
• Long desert ma ọ bụ uzuzu uzuzu njegharị / ezumike - Ọ bụrụ na ị nọwo na-pua ọ bụla desert ma ọ bụ uzuzu uzuzu ebe maka a azụmahịa tour ma ọ bụ ezumike maka agbatiri oge, ọ bụ eleghị na oghere ekpuchi gị iPhone ọkà okwu e-egbochi, n'ihi ya edebe ị si na àgwà ọdịyo mmepụta.
• dara ma ọ bụ kpuchie site irighiri / ájá / apịtị - ọzọ atụ mgbe nwere ike ị chọrọ ọcha gị iPhone ọkà okwu bụ mgbe ọ accidently dara ma ọ bụ kpuchie site ájá, apịtị ma ọ bụ irighiri ihe na ị na-enwe ụfọdụ edoghị ọdịyo mmepụta.
• Sara Mbara ojiji na-enweghị ọrụ - Ọ bụrụ na ị na-eji gị iPhone kemgwucha ogologo oge na na a àgwà nke na-eji ya ọkà okwu ọtụtụ, Ohere na carbon wee ikọbọde ọkà okwu njikọ, n'ihi ya igbochi doro anya ọdịyo mmepụta.
Na-ede nke isiokwu a, na website ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ya na-emekọ ga ghara ẹkenịmde maka ihe ọ bụla mebiri ngwaọrụ gị n'ihi na-esonụ nyere usoro ọhụma.
iPhone 4 mee ihe n'ebe a n'ihi na ngosipụta na ndị niile kposara na chọrọ screwdrivers / ngwaọrụ na-atụ aro dị ka sị nlereanya nke ekwentị naanị. Ọ bụrụ na ị nwere dị iche iche nlereanya nke iPhone, jide n'aka na ị na-ezi screwdrivers na chọrọ ngwaọrụ iji zere ihe ọ bụla anụ ahụ mmebi nke ekwentị ahụ ma ọ bụ ya n'ime akụkụ.
• Phillips # 000 sikruuokwomoto
• 2.5mm Flathead sikruuokwomoto
• Mkpa akwụkwọ
• Plastic mmepe Ngwaọrụ
• isopropyl 99% Mmanya
• abịakọrọ Air
• agba ahịhịa na Soft bristles
• Plain Akwụkwọ
1. Ike anya gị iPhone.
2. Jiri kwesịrị ekwesị sikruuokwomoto imeghe kposara na ala, ie na abụọ nke odori n'ọdụ ụgbọ mmiri.
3. Ozugbo unscrewed, jiri nwayọọ inupụ n'azụ panel nke ekwentị n'ebe n'elu.
4. Mgbe n'azụ panel aga gaba n'iru ruo 2mm, na-eji mkpịsị aka gị na-jiri nwayọọ dọpụta ya pụọ ​​n'ihu panel.
5. Jiri 2.5mm sikruuokwomoto wepụ ịghasa ugbu na ala-ekpe nke batrị. (Nke a na ịghasa na-eji jikọọ batrị njikọ na mgbagha osisi.) Cheta na: Ọ bụrụ na ekwentị gị nwere ihe abụọ kposara, na-emeghe ma nke ha na-eji ihe kwesịrị ekwesị sikruuokwomoto.
6. Ke ewere ịghasa (s) anya, na-eji a plastic oghere ngwá ọrụ, ma jiri nwayọọ sere batrị njikọ elu na nke ntọala ya ndị nwere.
7. Chọta plastic esiri taabụ na-eji ya jiri nwayọọ sere batrị si nke ekwentị. Cheta na: Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eji a plastic oghere ngwá ọrụ sere batrị ma ọ bụrụ na ọ na-ofu ukot na nrapado.
8. Wepu kọntaktị clip site na ekwentị gị.
9. Jiri akwụkwọ clip iwepụ ụda SIM kaadị tinyere ya tree site na ekwentị gị.
10. Iji ihe kwesịrị ekwesị sikruuokwomoto wepụ 1.2mm na 1.6mm Phillips kposara si nso n'ime onu nke SIM kaadị tree.
11. Wepụ nchara cover maka n'ọdụ ụgbọ mmiri USB njikọ.
12. Iji a plastic oghere ngwá ọrụ iji nwayọọ sere ma nsọtụ nke n'ọdụ ụgbọ mmiri USB njikọ kwụsịrị mgbagha osisi.
13. Jiri nwayọ sere n'ọdụ ụgbọ mmiri rịbọn USB kwụsịrị mgbagha osisi.
14. Iji a plastic oghere ngwá ọrụ, jiri nwayọọ sere ala poolu USB si ntọala ya ndị nwere na gbanyụọ mgbagha osisi.
15. Wepu mgbagha osisi ịghasa (1.9mm) iji kwesịrị ekwesị sikruuokwomoto ka ikwụpu mgbagha osisi si n'ime isi nke ekwentị gị.
16. Wepụ niile ise kposara si Wi-Fi poolu ka ikwụpu ya na mgbagha osisi.
17. Iji a plastic oghere ngwá ọrụ iji nwayọọ ebuli ndị Wi-Fi poolu si mgbagha osisi.
18. Jiri spudger si n'ọnụ jiri nwayọọ sere Wi-Fi poolu mkpachị efep eku.
19. Nlezianya wepụ Wi-Fi poolu si mgbagha osisi.
20. Iji a plastic oghere ngwá ọrụ, jiri nwayọọ sere n'azụ igwefoto njikọ si ntọala ya ndị nwere na mfep mgbagha osisi.
21. Ozugbo mgbagwoju, wepụ n'azụ igwefoto.
22. Wepu akwụkwọ ikike na mmiri egosi ihennyapade, na ihighari na kpuchie 2.4mm Phillips ịghasa na iji ziri ezi sikruuokwomoto.
23. Iji nsọtụ nke a plastic oghere ngwá ọrụ, sere digitizer, LCD, headphone Jack / olu button, ụra button / top okwu button, na n'ihu igwefoto cables anya n'ebe ha sockets na mgbagha osisi.
24. Wepu 4.8mm standoff si nso headphone Jack iji a Flathead sikruuokwomoto.
25. Wepu mgbagha osisi site na ekwentị ọma ma jiri nwayọọ na-eme n'aka ka ịhazie cables ya ma ọ bụrụ na ha na-ụzọ gị.
26. Wepu 2.4mm ọkà okwu ịghasa si n'ime eku.
27. N'ikpeazụ, jiri nwayọọ wepụ ọkà okwu nzukọ eku.
1. Iji a agba ahịhịa, eserese a obere ego nke isopropyl 99% mmanya.
2. Jiri nwayọ hichaa ọkà okwu na ahịhịa.
3. Ozugbo mere, na-eji abịakọrọ ikuku iji wepụ ihe ọ bụla ọzọ irighiri, ájá ma ọ bụ foduru nke isopropyl mmanya si ọkà okwu.
4. Ọzọkwa, echefula ọcha ọkà okwu n'oghere etiti nke ekwentị gị.
Ịchịkọtaghachi, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ nyere na Disassembling Your iPhone ngalaba na agbara iji nlezianya ịtụkwasị niile njikọ, Gịnị, na akpọkwa na ha sockets na ọdụ ụgbọ mmiri.
N'okpuru ebe a bụ ole na ole ihe na i kwesịrị iburu n'uche mgbe nhicha ọkà okwu gị iPhone:
1. Jiri a akwụkwọ na pen ka detuo usoro nke disassembling. Nke a ga-enyere gị aka ịchịkọtaghachi gị iPhone n'ụzọ ziri ezi.
2. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwekwara ike ise a esereese nke dị n'ime nzukọ gị iPhone na ebe ahụ wepụrụ kposara na nwoke ọnọdụ na esereese. Na nke a, ị nwere ike na-echeta nke ịghasa bụ nke nke ọnọdụ, ma ọ bụ kposara nke ihe gị iPhone.
3. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị na-eso ntụziaka n'elu n'ụzọ ziri ezi na-ebu n'isi nke USB ma ọ bụ ihe e gbakọrọ na ihe ụzọ. Nke a ga-enyere gị aka ịchịkọtaghachi gị iPhone kwesịrị ekwesị na-enweghị na-eme ihe ọ bụla mebiri na ya.
4. I nwekwara ike iji a igwefoto idekọ disassembling usoro na-eji dere video ịchịkọtaghachi ekwentị gị n'ụzọ ziri ezi.
5. Always eji mbụ na-ewere ngwaọrụ mgbe disassembling na reassembling gị iPhone izere ihe ọ bụla mebiri na ngwaọrụ.
Nhicha gị iPhone si ọkà okwu mgbe ụfọdụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị maghị ihe na-eme, ọ ga-ezi echiche-gi iPhone ka kacha nso Apple Store ma ọ bụ Authorized Service Center na-enweta ya serviced site ọkachamara.
Olee otú Wepụ ozi ederede site na iPhone
> Resource> iPhone> esi ọcha iPhone Ọkà Okwu (iPhone 4)